“Is-dhexgalka Bulshada Mushkilad Maaha, Haddii Hoggaamiyaha Somaliland u Arko Dhibaato Wuu Joojin Karaa” Prof David Shinn | Togdheer News Network
“Is-dhexgalka Bulshada Mushkilad Maaha, Haddii Hoggaamiyaha Somaliland u Arko Dhibaato Wuu Joojin Karaa” Prof David Shinn
Prof David Shinn ayaa hoosta ka xariiqay inaanu is-dhexgalka bulshada sida (dhaqanka, tacliinta, isboortiga, iyo ganacsiga) mushkilad ahayn, laakiin, hadii hogaamiyaha Somaliland u arko dhibaato, wuu joojin karaa.
Prof David Shinn oo ah dublamaasi khibrad balaadhan u leh Geeska Afrika, sannado badana dalkiisa u safiir uga ahaa dalka Itoobiya oo khadka fariimaha Maxamuud Walaaleye oo ka tirsan bahda Horn Tribune waraysi kula yeeshay ayaa soo dhoweeyey warmurtiyeedki wadaxaajoodka Somaliland & Soomaaliya ee Jabuuti, kuna tilmaamay tallaabada u horreysa ee wanaaga loo qaaday.
Waraysiga oo dhammaystiran wuxuu u dhacay sidan;
S- Sidii lagu soo saaray war-murtiyeedkii ugu dambeeyay ee wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya? Waa maxay fikirkaagu? Marka la eego sida bulshada reer Somaliland qaarkood shaki uga muujiyeen qodobka isu-socodka bulshada?
Waxaan u arkaa Warmurtiyeedka wadajirka ah inuu yahay tallaabada u horreysa ee wanaaga loo qaaday. Sida muuqata ma jirin wax heshiis ah oo la xidhiidha qadiyadaha muhiimka ahaa, balse dariiqii loo mari lahaa xalinta arrimaha.
Is-dhexgalka bulshada sida (dhaqanka, tacliinta, isboortiga, iyo ganacsiga) waxaan u arkaa inaanu mushkilad ahayn.
S-Waa maxay muhiimada wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya, haddii Beesha Caalamku doonayso midnimo dhaxmarta labada dal?
Haddii Somaliland ka noqosho la’aan ka go’antahay xornimadu, muhiimad weyn ma laha wada hadal dhexmara Soomaaliya iyo Somaliland haddii aysan Somaliland ka fikirayn inay ka dhaadhicin karto Soomaaliya aqbalaada madax-bannaanideeda. Ma aaminsani inuu jiro heshiis bulshada caalamku u dhan tahay oo la xidhiidha sida natiijadii ugu dambaysay noqonayso.
S-Hadaan Somaaliya diyaar u ahayn aqbalaada madaxbanaanida, waa maxay danta ku jirta wadaxaajoodka?
Waxaan had iyo jeer ku dooda, aaminsannahayna in su’aasha aqoonsiga Somaliland ay go’aamiso Midowga Afrika. Isla mar ahaantaana, haddii wadahadalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland uu yarayn karo xiisadda ama xitaa xallin karo arrimo yaryar si ku meel gaar ah ama gebi ahaanba, taasi waa wax wanaagsan.
S-Hogaamiyaasha Somaliland miyaanay qaadaci karin wadaxaajoodka u dhexeeya Soomaaliya, haddii aanay keenayn rajada shacabka? Mise waxaa jira culays Beesha Caalamka?
Waxaan filayaa in dadka reer Somaliland aad u akhrinayaan waxyaabaha ku saabsan isu-socodka bulshada.
Hogaamiyaasha Somaliland ayaa go’aamin kara waxa u dan ah iyo waxa aan dantoodu ku jirin. Uma maleynayo in bulshada caalamku joogto mowqif adag oo ay ku khasbi Somaliland siday u dhaqmi lahayd.
Is-dhexgalka bulshada mushkilad maaha, hadii Hogaamiyaha Somaliland u arko dhibaato, wuu joojin karaa.